Sab-boonummaa Oromoo Laamshessuuf Shirri Dalagamu Kamuu Laaftuutti Ilaalamuu Hin Qabu – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSab-boonummaa Oromoo Laamshessuuf Shirri Dalagamu Kamuu Laaftuutti Ilaalamuu Hin Qabu
(Ijoo Dubbii ABO – Ebla 24, 2018)
(SBO/VOL – Ebla 24,2018) Rakkina siyaasaa, dinagdee fi hawasummaa furmaata waaraa argachuu hanqatee baroota hedduuf Impaayera Itoophiyaa hunkuraa yoona gaheef sababni guddaan tokko Sabni Oromoo Bilisummaa ofii sarbamee Afaan, Aadaa fi Seenaan isaa gita bittoota Itoophiyaatiin awwaalamaa fi hacuucamaa turuu dha. Sabni Oromoo haala kana jijjiiree Bilisummaa isaa gonfachuuf qabsoo hadhaawaa geggeessaa yoona gahe. Wareegama ulfaataas itti baase; har’as baasaa jira.
Afaan, Aadaa fi Seenaa Oromoo balleessanii kan biraa irratti dagaagsuudhaan eenyummaa Sabichaa (Oromummaa) dhabamsiisuuf dabni gita bittoota Itoophiyaatiin dalagame miidhaa guddaa Oromummaa irraan gahe. Ilaalcha Sab-boonummaa Oromoo hedduu miidhe. Akka kanaanis Qabsoon Oromoon mirga ofii kabajsiifachuuf haala adda addaan gochaa ture hundeeffamuu Adda Bilisummaa Oromootiin qindoomina sadarkaa Sabummaa horachuu isaa dura eenyummaan Saba Oromoo (Oroummaan) dhabamuuf sadarkaa yaaddessaa irra gahee ture. Sab-boonummaan Oromoo kan Afaan, Aadaa, Seenaa fi walumaagala eenyummaa ofiittii boonuu fi ittiin of ibsuun hafee bakka hedduutti maqaa Amantii, Kutaa fi Gosaan sadarkaa of ibsuu irra gahamee ture. Miidhaa qor-qalbii haalli kun geessiseen namootni Oromummaa isaanii dhoksanii eenyummaa alagaatiin of himuuf dirqamanis lakkoofsi isaanii xiqqaa miti.
Qabsoo qindaawaa Oromoon akka Sabaatti gurmaawee Bilisummaa afaan qawweetiin sarbame deebisee gonfachuuf hoogganummaa Adda Bilisummaa Oromootiin geggeessee fi wareegama ulfaataa ilmaan Saba Oromoo qabsoo kana keessatti baasaa yoona gahaniin Afaan, Aadaa fi Seenaan Sabichaa awwaallamuu fi hacuucamuu keessaa bahee deebi’ee akka lalisu taasifamuu danda’e. Sana bira kutees biyyi Oromoo/Oromiyaan ‘Map’ irratti akka beekamtu taasifame. Akkanaanis Sab-boonummaan Oromoo deebi’ee dagaage. Kun ammoo Sabni Oromoo Bahaa-Dhihatti, Kaabaa-Kibbatti Oromummaadhaan of beekee fi wal beekee waan akka Sabaatti waliin sarbame sana (Bilisummaa fi mirga Abbaa-biyyummaa isaa) deebisee gonfachuuf tokkummaadhaan falmaa akka finiinsu taasise.
Gama kaaniin mootummootni Itoophiyaa irratti wal jijjiiranii hanga har’aatti aangoo qabatan hundi qabsoo Sabni Oromoo Bilisummaa isaa gonfachuuf geggeessu kana sirnaan keessummeessanii deebii sirrii furmaata waaraa fidu barbaaduuf hanga har’aatti fedhii hin agarsiisne. Yeroo hundumaa akka Gaaffii Mirgaa fi Gaaffii Haqaa Sabni tokko mirga isaa kabajsiifatuuf kaasuutti osoo hin taane akka sochii biyya diiguutti ija shakkii fi diinummaa qofaan ilaalanii, maqaa Dhiphoo, Farra Nagaa, Foxxoqxummaa/Secessionist, Goolessituu….fi kkf itti moggaasuudhaan gaaffii haqaa Sabni Oromoo Bilisummaa isaaf kaase kana afaan qawweetiin dhabamsiisuuf yaalaa yoona gahan.
Kaayyoon Mootummootni Itoophiyaa Gaaffii Bilisummaa Oromoo akka ilaalcha dhiphummaatti dhiheessuu yaalaniif ilaalcha Sab-boonummaa Saba Oromoo ittiin cabsuudhaan hamilee qabsoo bilisummaa keessatti ajjeesuufi. Garuu hanga har’aatti itti milkaawuu hin dandeenye. Yoom illees itti milkaawuu hin danda’an.
Sab-boonummaan Oromoo ilaalcha Oromummaa irraa madda. Oromummaan ammoo jaalala, kabajaa angafaa-quxisuu, wal-qixxummaa dhala namaa, seeratti buluu, haqa jallisuu dhabuu fi nagaaf iddoo ol’aanaa kennuudhaan kan beekamu tahuu isaa seenaa Sirna Gadaa Oromoo irraa hubachuun ni danda’ama. Dhugaa har’aan tana hojiidhaan lafa irratti mul’achaa jirus yoo ilaalle Sab-boonummaan Oromoo ofittummaa fi dhiphummaa irraa walaba tahuu ifatti argaa jirra. Yeroo ilmaan Oromoo lakkoofsaan miliyoona gahan lafoota Ollaa Oromiyaa irraa humnaan buqqifamanii jireenyi isaanii manca’u warra yakka kana dalagee fi dalagsiise irratti hijaa bahuuf jecha yakki wal fakkaataan Alagoota Oromiyaa keessa jiran irratti dalagamuu dhabuun isaa kanaaf ragaa mul’ataa dha.
Dhiheenya kana EPRDF keessatti OPDOn barcuma Dura taa’ummaa Addichaa fi Muummee Ministeerummaa Itoophiyaa akka argatu kan taasise dhiibbaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo (keessaattuu dhiibbaa Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo)tiin akka tahe nama hundatu beeka. Kun ammoo bu’aa Sab-boonummaa Oromoo ti.
Haala kanaan gara aangoo Muummicha Ministeerummaa Itoophiyaatti kan dhufan Dr. Abiy Ahmed marii dhiheenya kana Baahirdaaritti dhalattoota naannichaa waliin geggeessan tokko keessatti waa’ee Sab-boonummaa irraa oggaa dubbatan “Sab-boonummaan Oromoo Saba guddicha xiqqeesse. Waa’ee biyyaa, waa’ee naannichaa fi waa’ee Afriikaa yaaduu hanqisee gadi deebisee gandatti galche.” jedhanii oggaa dubbatan dhagahuun hedduu gaddisiisaa fi qaanfachiisaa dha. Kun gonkuma dhugaa irraa kan fagaatee fi dogoggora guddaa dha. Ummata Oromoo eenyummaa isaa dhabama diinni itti aggaame jalaa baraaree Bilisummaa isaa gonfachuuf wareegama ulfaataa baasaa turee fi jiruufis arrabsoo fi tuffii guddaa dha.
Dr. Abiy matuma isaanii fi Dhaaba isaanii OPDO sadarkaa aangoo amma EPRDF keessatti argatan kanaan kan isaan gahe Sab-boonummaa Oromoo tahuun osoo beekamuu dubbii Saba Oromoo gaddisiisuu fi isaanumaanis taajjabbii guddaa keessa galchu akkanaa afaan Dr. Abiy irraa dhagahuun Ummata Oromootiif ergaa guddaa qaba.
Ummatni Oromoo bu’uura tokkummaa isaa kan tahe ilaalcha Sab-boonummaa Oromummaa isaa laamshessuuf balaa qixa kamiinuu itti aggaamamu dammaqiinsa ol’aanaadhaan of irraa tiksuu danda’uun galma gahiinsa Qabsoo Bilisummaa itti jirruuf murteessaa dha.
ኮማንድ ፖስቱ ለጠቅላይ ሚኒስተሩና ለፖለቲካው አመራር ሪፖርት አላቀርብም አለ